UYILO LWEKHITSHI LABAPHEKI (ISIKHOKELO SEENGCAMANGO ZAMAPHUPHA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Uyilo lwekhitshi labapheki (Isikhokelo seengcamango zamaphupha)
Uyilo lwekhitshi labapheki (Isikhokelo seengcamango zamaphupha)
Wamkelekile kwisikhokelo sokuyilwa kwekhitshi lokupheka kubandakanya ukuba yintoni, kunye nezona zimvo zilungileyo zokuphupha ukwenza inkangeleko kwaye uzive usekhaya lakho.
Ukuba uthanda ukupheka kwaye ufuna ukwandisa into onokuyenza ekhitshini lakho lasekhaya, kunokuba lixesha lokuba uqwalasele uhlobo olwahlukileyo lwekhitshi! Ngelixa ikhitshi eliqhelekileyo lilungele uninzi lwabapheki basekhaya, ikhitshi labapheki linokuthatha izakhono zakho zasekhitshini lasekhaya ukuya kwinqanaba elilandelayo. Ezi ntlobo zamakhitshi zikhulu kwaye zixhotyiswe ngokufanelekileyo ukulungiselela iimfuno zompheki onetalente okanye oqeqeshiweyo kwaye azikhawulelwanga kwiimeko zeshishini nokuba. Ngolwazi oluchanekileyo kunye nomsebenzi othile, unokuba nekhitshi labucala labapheki bakho.
Ukwenza oku, nangona kunjalo, kufuneka wazi yonke into malunga nokufaka ikhitshi labapheki ekhayeni lakho. Kungenxa yoko, apha, siza kuqhekeza iziseko malunga nokuba yintoni ikhitshi labapheki, elinokukwenza kona, kunye nezona ndlela zilungileyo zokuphumeza enye ekhayeni lakho.
Yintoni Ikhitshi Lompheki?
Umahluko phakathi kweKhitshi labapheki kunye neGourmet Kitchen
Iingcamango zeKhitshi yeChef
Vula uyilo lweKhitshi kunye nesiqithi esikhulu
Abapheki Ikhitshi ngesiFriji esikhulu
Isiqithi seKhitshi kunye neeDrawer zeFriji
Ikhitshi elineShelving evulekileyo
Uyiseta Njani Ikhitshi Lompheki
Ikhitshi lokupheka lenzelwe ukuba lidlule ngaphaya kwezinto eziqhelekileyo zekhitshi lasekhaya eliqhelekileyo. Ayilungelanga kuphela iimfuno eziqhelekileyo zabapheki basekhaya, kodwa ikwajolise ikakhulu ekuhlangabezeni iimfuno eziza kuba nazo umpheki oqeqeshiweyo. Kukhetho oluqhelekileyo kwiikhikhini zeshishini ezinjengeevenkile kunye neehotele. Nangona kunjalo, ezi zinokuba sisongezo esihle nakowuphi na umpheki oqeqeshiweyo ofuna ukuba yonke imigibe asebenze nayo kwindawo yabo.
Ikhitshi lokupheka lidla ngokubandakanya izinto ezimbalwa eziphambili. Kwesinye, kuhlala kukho izitovu ezininzi ukulungiselela abapheki abaninzi. Oku kuhlala kufezekiswa ngokusetyenziswa kweziqithi kunye nendawo eyongezelelweyo yokubala. Uyilo olusebenza kakuhle nekhitshi evulekileyo.
Ezi zitovu zihlala zizitovu zerhasi kunye neyunithi yeBritish thermal (BTU) ephezulu kunesitovu sasekhaya esiqhelekileyo. Ngelixa isitovu esiqhelekileyo sifikelela malunga ne-7,000 ye-BTU, isitovu sekhitshi sompheki sihlala sifikelela kwi-23,000 BTU. Iikhikhini zabapheki zihlala zifaka iintlobo ezahlukeneyo zesitovu kunye nokuvumela iintlobo ezahlukeneyo zokupheka kunye nokufudumeza iidrowa zokugcina ukutya kubumnandi kude kube kuphakwe.
Isinki ekhitshini yompheki nazo zinzulu kunesinki esemgangathweni. Oku kukuvumela ukuba uhlambe izitya, uhlambe ukutya, okanye ugcwalise iimbiza ezinzulu. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokugcwalisa iimbiza, itephu eyongezelelweyo ngohlobo lwepasta yokugcwalisa iimbiza esitovini.
Abanini bamakhaya nabo bahlala bekhetha ukuhlamba isitya ekhitshini labapheki babucala. Emva kwakho konke, mhlawumbi awunakho abasebenzi abapheleleyo bekhitshi ukukunceda ugcine izitya ngelixa upheka. Oku kuthetha isixhobo esizenzekelayo ukukunceda uphume uya kuhamba indlela ende!
yeyiphi iminwe eyenza umsesane
Ezi khitshi zibandakanya izixhobo ezahlukeneyo ngokunjalo. Oku kunokubandakanya izixhobo zakho ozithandayo kunye nezona zisetyenzisiweyo okanye izixhobo zenziwe nje ukukunceda uhlale uhlelekile ukuze yonke into ibe lapho uyifunayo, kanye kanye xa ufuna kakhulu.
Abapheki basekhaya banokuba nomdla kwikhitshi labapheki okanye kwi ikhitshi gourmet ukulungiselela iimfuno zabo ngendlela ekhitshini lasekhaya eliqhelekileyo elingenakho. Nangona kunjalo, la magama mabini awatshintshi. Ngokwenyani babonisa iikhonsepthi ezahlukileyo ezilungiselela iimfuno ezahlukeneyo zokupheka.
Okokuqala, kubalulekile ukuqaphela ukufana kwabo. Zombini ezi ntlobo zekhitshi zenziwe ukuba zidlule ngaphaya kwekhitshi esemgangathweni. Ngaphezulu kwelo, ukhetho ngalunye luhlala luzaliswa zizixhobo ezisemgangathweni ophezulu kunye neekhonsepthi zoyilo ezinjengendawo yokubala eyongezelelweyo.
Oko kuthethiweyo, umahluko ophambili kukuba iikhikhini ze-gourmet zihlala zibhalwe ngokwabantu. Ikhitshi labapheki liya kukhawulelana neemfuno zakhe nawuphi na umpheki onesiphiwo ngelixa iikhitshi ze-gourmet zenzelwe umpheki othile - kule meko, umninikhaya - iimfuno zokupheka.
Umzekelo, sele sigubungele iimpawu eziqhelekileyo zekhitshi labapheki. Kwelinye icala, ikhitshi elinegourmet linokuba neempawu ezingaqhelekanga kwikhitshi eliqhelekileyo lokupheka onokuthi uphulukane nalo njengezixhobo zokuziqhelanisa nokukhetha imifuno yakho yasekhaya!
Kwangokunjalo, ikhitshi elinegourmet linokungazibandakanyi izixhobo eziqhelekileyo kwikhitshi lokupheka eliqhelekileyo. Ukuba akunakufane usebenzise isixhobo esiqhelekileyo, ungafumana uyilo lwekhitshi gourmet ukubuyisela eso sixhobo ngento onokuthi usebenzise yona. Nangona kunjalo, uyilo lwekhitshi labapheki lwenzelwe ukuba nezinto eziyimfuneko ezifunekayo kuye nawuphi na umpheki.
Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo onokuthi uzenze ngokupheleleyo ngokuguqula ikhitshi lakho lasekhaya libe likhitshi labapheki. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, enye yeendlela ezilungileyo zokwenza oku kukusebenzisa uyilo oluvulekileyo lwekhitshi . Izixhobo ezinjengeziqithi ziyindlela entle yokongeza indawo ethe kratya ethe kratya kulo naliphi na ikhaya.
Kuya kufuneka uwuqwalasele ngononophelo umxholo wakho. Ngaba ufuna inkangeleko yanamhlanje yeekhitshi ezininzi zeshishini okanye ungathanda ukugcina uyilo lwekhitshi lakho lokupheka lonwabile? Ukuba eyokugqibela iyinyani, unokukhetha ukufaka endaweni yesinyithi kunye nemibala engathathi hlangothi ngokhetho loyilo lwe-rustic ngelixa ugcina zonke izibonelelo zilungile.
Indawo yabantu abaninzi yokupheka ngaxeshanye iyimfuneko kuyo nayiphi na ikhitshi labapheki. Isiqithi esikhulu yenye yeendawo ezilungileyo zokuhlanganisana ekhitshini kunye nokwenza kunye nesampula yokutya okumnandi. Iziqithi ezinesiphumo unxantathu osebenza ekhitshini vumela umntu ukuba alungiselele ukutya ngokulula kwaye abe nezinto eziyimfuneko ngaphakathi kufutshane.
Kuba ifriji yenye yezona zinto zisetyenziswayo ekhitshini iyavakala ukuba uyilo lwabapheki olufanelekileyo luya kuba nolunokugcina indawo enkulu yokugcina. Kuba ifriji yiyo egcina izithako zakho zintsha kwaye zikhuselekile ukuba zingatya kubalulekile ukuba inkulu ngokwaneleyo ukuba ingakwazi ukugcina into oyifunayo ngendlela ehleliweyo.
Iimpawu zokuphela eziphezulu zezixhobo ezinje ngeSub-Zero kunye neWolf, iLa Cornue, iViking, iMiele, iGaggenau kunye neThermador zihlala zifunwa emva kokongezwa kwayo nayiphi na uyilo lwekhitshi labapheki.
Izikhenkcisi zefriji kwisiqithi sekhitshi zivumela umntu ukuba afikelele ngokukhawuleza kwizithako ezifunekayo ngexesha lokulungiselela isidlo esibalulekileyo kumpheki oxakekileyo.
ngowuphi umnwe owenza umsesane wokuzibandakanya uyaqhubeka
Ifriji yewayini sisixhobo esihle sokuyilwa kwekhitshi yompheki, njengoko ukudibanisa iwayini kunye nokutya kuhlala kuthathwa njengeyona nto ibalulekileyo kukonwaba. Ukulungiselela iwayini yakho kubushushu obufanelekileyo kubaluleke kakhulu ngelixa usonwabisa iindwendwe.
Iidrowa zokufudumeza lulongezo olukhulu lokugcina ukutya kushushu ngelixa ulungiselela ukutya.
Ikhitshi lemveli elinokuhombisa ucango lwepantry .
I-pantry egcinwe kakuhle iyimfuneko kuye nawuphi na umpheki. I-pantry ilungile, iyajongeka kwaye iyafikeleleka. Intsingiselo elula ukuba yonke into ikufutshane nalapho ifuneka khona. Iyajongwa, njengoko izinto zinokufunyanwa kwaye zibonwe ngokujonga nje. Iyafikeleleka, ithetha ukuba izinto azidingi kuphinda zilungiswe ukuze ufumane into oyifunayo xa uyifuna.
Ikhitshi elineshelfu evulekileyo livumela ukufikelela kunye nokusebenza. Ukuba unxibe ipleyiti ngokufikelela ngokulula kufana nekhitshi yokwenyani yeshishini eyenzelwe ukulungiselela ukutya ngokukhawuleza.
Ukuba nesinki engaphezulu kwesinye kuluncedo ekulungiseleleni ukutya nasekuhlambeni izitya. Ubuncinci isinki enye enzulu iyacetyiswa ukuhlanjwa kwemifuno okanye izitya ezimdaka. Isinki enzulu ikwavumela umntu ukuba agcwalise imbiza egcwele amanzi xa kufuneka njalo. Enye into yoku kukufaka isitya sokugcwalisa itephu yeteleskopu ukuze kube lula.
Xa ulungiselela izitya ezininzi ikhitshi lekhitshi okanye isiqithi esinezixhobo ezinkulu zokusika kunokuba sisongezo esifunekayo ukunceda umntu afumane ngokukhawuleza esona sixhobo sifunekayo somsebenzi. umququzeleli ofanelekileyo wezinto zokucheba angahlula izixhobo kwiindawo ezahlukileyo ukunceda ukugcina yonke into isendaweni yayo apho kulula ukuyifumana.
Isiqithi sekhitshi esinendawo yokuhlala nee-oveni ezininzi.
Ikhitshi elinee-oveni eziphindwe kabini okanye ezo zine-convection eyongezelelweyo okanye i-oven yomphunga inokunceda xa ulungiselela izifundo ezininzi. I-oveni ezininzi ziya kuvumela umntu ukuba alungiselele ukutya ngokukhawuleza kwaye zivumele umntu ukuba abhake, umphunga, irost, i-grill okanye i-broil ngaphezu kwento enye ngexesha.
Kukho iindlela ezimbalwa ezisisiseko onokuthi uqale ngazo ukuguqula ikhitshi lakho liyile ikhitshi labapheki. Ezi zezinye zeengcebiso onokuziphatha kwangoko nangaphambi kokuba uthathe ukulungiswa okuchitha ixesha.
Ekuqaleni, cima imiphezulu yeetafile yakho yasekhitshini . Ngelixa kukho iindlela ezininzi zokusebenzisa izinto zokuhombisa kwiitafile zakho, umpheki ngokubanzi ufuna indawo yokusebenza kangangoko. Ke, gcina imihombiso eyongezelelweyo ubuncinci.
Enye into onokuyenza kukuhlengahlengisa ikhitshi lakho ukuze izinto kunye nezixhobo ozifuna kakhulu kube lula ukufikelela kuzo. Enye indlela efanelekileyo yokwenza oku kukuxhoma izimbiza zakho kunye neepane kwindawo yokubeka ngaphezulu kwendawo yakho yokusebenza. Ngale ndlela, kufuneka ubabambe kuphela xa ubadinga kunokuba ube umpu ngokusebenzisa iidrowa kunye neekhabhathi.
Ngokugcina iidrawer zakho zicwangciswe kakuhle ngaphandle kokuxinana ungafumana ngokulula isixhobo esifunekayo somsebenzi okhoyo. Susa yonke into ongayifuniyo ukuze izinto zibonakale lula xa uzifuna. Zama ukuya kumgangatho ngaphezu kobungakanani xa usenza isigqibo sokuba yeyiphi na izixhobo kunye nezixhobo zokugcina. Gcina kuphela izinto ozisebenzisa rhoqo kwaye ususe ezinye.
Ukukhupha impahla yakho eyomileyo kunye nokuyigcina kwizikhongozeli kunokukunceda wazi into onayo. Oku kwenza kube lula xa ilixesha lokuzisebenzisa. Ukongeza ukubona into onayo kuyenza isebenze ngakumbi ngaphambi kokuba uye ezivenkileni kwaye kunceda ukunqanda ukuvula iingxowa ezongezelelekileyo zezinto ngempazamo.
Ukugcina izithako zakho zilungile nokuba zikwizikhongozeli, i-spice rack okanye iingqayi zinokukunceda wenze indawo elungileyo. Ngelixa ulapho, ukulungiselela ifriji ngokwenqanaba kunokuba yinto ekhuselekileyo yokugcina ixesha.
Zininzi iindlela onokuthi uguqule ikhitshi lakho lasekhaya libe likhitshi elilungele umpheki ukuze wandise izakhono zakho kunye nemveliso. Ukukunceda ube nomfanekiso-ngqondweni wezimvo zakho zininzi ezahlukeneyo Iinkqubo zoyilo lwekhabinethi yasekhitshini Ungayisebenzisa ukuzisa uyilo lwakho ebomini.
yintoni oza nayo kwitheko lokukhumbula iminyaka engama-50
uwuthumele nini ugcine umhla
umgangatho wokomisa umgangatho
ukubopha iqhina lesaphetha sedummies